Ịchaji ikuku ikuku ga-emebi batrị ekwentị?
Chaja ikuku nwere ike imebi ekwentị? Azịza ya bụ N'ezie Mba. N'oge a, ugboro na ndabere nke ekwentị mkpanaaka na-arị elu na elu. Enwere ike ịsị na "ọ na-esiri ike ịkwaga na ...
Kedu chaja ikuku maka iphone 13?
Enweghị chaja n'igbe ahụ? Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịchaji iPhone 12 na 13 Apple iPhones kacha ọhụrụ anaghị eji ihe nkwụnye ọkụ ebu ụgbọ mmiri, mana ha na-akwado chaja MagSafe ikuku nke Apple. Ma ị na-eji eriri ma ọ bụ na ị naghị, ndị a bụ f ...
Kedu ihe kpatara chaja iPhone ikuku m ji na-enwu?
Kedu ihe kpatara chaja ikuku ji na-acha uhie uhie? Ìhè na-acha uhie uhie na-egbuke egbuke na-egosi ihe iseokwu na ịchaji, nke a nwere ike ịkpata ya site n'ụdị dị iche iche. Biko lelee azịza ndị dị n'okpuru. 1. Biko lelee ma th...
Ọ dị mma ịhapụ ekwentị na chaja ikuku otu abalị?
Enwere m ike itinye ekwentị m na chaja ikuku otu abalị? A na-anabata chaja ikuku nke LANTAISI, mgbe ekwentị chajịchara, ọ ga-akwụsị chaja. Ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị nwere arụ ọrụ dị iche iche, dị ka ihe na-emebiga ihe ókè, chaja karịrị akarị, oke ọkụ,...
A ga-agbaba ọsọ nchaji okpukpu abụọ mgbe ị na-anya ma wired na ikuku n'otu oge?
site admin na 21-11-06
Mba, mgbe wired na ikuku chaja n'otu oge, ekwentị nwere ike ịmata wired chaja ka ọ chajịa. Ya mere, ọsịsọ nchaji agaghị okpukpu abụọ mgbe ị na-akwụ ụgwọ ma wired na ikuku n'otu oge. ga...
Kedu ihe kpatara chaja ikuku iPhone na-adịte aka ma ọ bụ enweghị ike ịgba ụgwọ?
Ọtụtụ ndị ahịa ajụọla anyị gbasara oge ma ọ bụ ọdịda ịchaji iPhone n'oge chaja ikuku. Nke a ọ bụ nsogbu na iPhone ma ọ bụ chaja? Anyị nwere ike dozie nsogbu nke oge ma ọ bụ enweghị ike ịcha chaja ikuku iPhone? ...